blogspot template ပြောင်းလို့မရပါ — MYSTERY ZILLION
blogspot template ပြောင်းလို့မရပါ
March 2008 edited May 2009 in Blog
ကို saturn ရေ .... အကူအညီတောင်းချင်လို့ပါ ... ကျနော့် blog ကို blogspot မှာ myanmar blgger theme ထဲက simple II Fluid Theme ပြောင်းလိုက်ပါတယ် ... အခုတခြား template ပြောင်းလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ် ... ဘာဖြစ်သွားတာလဲမသိဘူး ... ဘယ် template ပြောင်းပြောင်း Simple II Fluid Theme ပဲပေါ်နေလို့ ... :2:
html code တွေတော့ ပြောင်းသွားတယ် ... template ကမပြောင်းဘူးဖြစ်နေတယ် ...
March 2008 edited March 2008 Administrators
အဲဒါ cache ကြောင့်ပါ... မပူပါနဲ့ ... ပြောင်းသွားပါတယ်... တကယ်လို့ ပြောင်းသွားတာ မြင်ချင်ရင်တော့ firefox မှာ ဆို Tool > Clear Private Data မှာ cahce ကိုဖျက်လိုက်ပါ။ IE မှာဆိုရင်တော့ Tool > Internet Options > Delete မှာ ဖျက်လိုက်ရင် ဖြစ်ပါတယ်။
March 2008 edited March 2008 Registered Users
ဂလိုကိုး ... thz par ... ရပီရပီ ... လူကိုချွေးပြန်သွားတာပဲ ... ဟဲ ဟဲ :67:
" This blog is under review due to possible Blogger Terms of Service violations, and is currently unpublished. You can view your blog's posts here in Blogger, but not make any changes. "
ကယ်ပါအုံး ... ကျနော့် blog တွေထဲကတစ်ခုက အဲဒီလိုပေါ်နေတယ်။ ဘာမှလဲ ပြောင်းလို့မရတော့ဘူး။ ဘယ်လိုပြန်လုပ်ရမလဲဗျ။ ဘာမှလဲမလုပ်မိပဲ ဘာလို့အဲ့ဒီဟာကြီးပေါ်နေမှန်းမသိဘူး ... ဗြဲ...
( ရဘူးဗျာ .... ရဘူး .... မနေ့ကကြည့်တော့ရတယ်။ ဒီနေ့ address bar မှာ လိပ်စာရိုက်ပြီး၀င်တော့ ရတော့ဘူး .... အရင်အဟောင်းပဲဖြစ်နေတယ် (
Blogspot က ဥပဒေကို ချိုးဖောက်တယ်လို့ ပြောထားပါတယ်... ဘာတွေ သွားလုပ်ပါသေးလဲ... သူတို့ပြောထားတဲ့ အချက်တစ်ချက်ချက်ကို သွားထိခိုက်လို့ ပိတ်လိုက်တာပါ... blogger.com မှာ သွားပြီး မေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်...
ဘာမှမလုပ်ရပါဘူးဗျာ .... template ပြောင်းတယ် .... post တွေ ၈ ခုလောက်တင်လိုက်တယ် .... အားလုံးတော့ မြန်မာလိုရေးထားတယ် .... blogger.com မှာဘယ်လိုမေးရမှာလဲ .... contact blogger support မှာသွားကြည့်ရင်တော့ ....
လို့ပေါ်နေတယ် ... ဘယ်လိုပြန်လုပ်လို့ရမလဲ ... ပြန်ဖွင့်လို့ရနိုင်သေးလား .... မရရင်လဲဖျက်ပစ်ချင်တယ် .... ဘယ်လိုဖျက်ပစ်ရမလဲ .... blog name လေးပြန်လိုချင်လို့ .... ကူညီပါအုံးဗျာ.....
ခဏစောင့်လိုက်ပါ... သူတို့ရဲ့ spam system က creativefox ရဲ့ blog ကို spam လို့ဖော်ပြလို့ ပိတ်မိလိုက်တာပါ... အခု မဟုတ်မှန်း သူတို့သိသွားပါပြီ။ သူတို့ ပြန်ဖွင့်ပေးမှာပါ။ ၁ ရက်ကျော်ကျော်လောက်ပဲ အများဆုံးကြာမှာပါ။ ခဏလေး စောင့်လိုက်ပါဗျာ။
အဟား .... အဆင်ပြေသွားပြီ ... ပြန်ရပြီ ... ဟူး တော်သေးတာပေါ့ ... သူ့ ဘလောက်ဥပဒေးမှာ စာတွေချည်းပဲတင်ရင် စပန်လို့ မှတ်မယ်လို့ရေးထားတာကိုး ... ရှဲ့ရှဲ့ ကိုစေတန်ရေ ... ၀ိုင်းပြီးဂေါင်းစားပေးတာ ...
ကိုစေတန်ရေကျွန်တော် ဘလော့ကtitileမှာမြန်မာလို ရိုက်ရင်ကောင်းကောင်းမပေါ်ဘူးဖြစ်နေလို့...ဘယ်လိုကြောင့်လဲပြောပြပါဦး..:D
:13: ဆိုးပြီဗျာ ... ကျနော့် blog မှာ EOT code တွေထည့်လိုက်ရော .... template တစ်ခုလုံးပျက်သွားတယ် ... ဘယ်လိုဖြစ်တာပါလိမ့် ... အဲဒီ EOT ကိုပြန်ဖျက်လိုက်တော့ ပုံမှန်ဖြစ်သွားတယ် ... ရှိပြီးသား template တွေသုံးရတာ စိတ်တိုင်းမကျဘူးဗျာ .... ကိုယ်တိုင်ဆွဲချင်တယ် .... ဘယ်လိုဆွဲရမယ်ဆိုတဲ့ အဆင့်ဆင့် ရှင်းပြပေးရင်ကောင်းမှာဗျာ .... html နဲ့ css ကို နည်းနည်းလေးတော့သိတယ် .... ဒါပေမဲ့ blog code တွေကိုတော့နားမလည်ဘူး
ကိုစေတန်ရေကျွန်တော့်ဘလော့ကို IE နဲ့ကြည့်ရင်လေးထောင့်အတုံးလေးတွေပဲမြင်နေရတယ်... မြေခွေးမီးမှာတော့ပေါ်တယ်ဗျ..့ IE>accesiblity>format using style sheet မှာလဲ ie.css တွေဘာတွေလဲလုပ်ထားပြီးပြီ..ဒါနဲ့ IE>accesiblity>ignore font style specified on webpages မှာ check လုပ်ထားရင်တော့ပေါ်တယ်...နောက်တစ်မျိုးက eot ကိုစက်ထဲကနေ uninstall လုပ်လိုက်ရင်လဲပေါ်ပြန်ရော...eot လဲနှစ်ခါရှိပြီလုပ်တာ..ခေါင်းလဲတော်တော့်စားနေပြီ...လုပ်ပါဦးဗျ.. ုုkkawave.blogspot.com
ကျွန်တော် တွေ့တာဒီလိုပါ ..
font: normal normal 100% 'Lucida Grande','Trebuchet MS';
ဒီတော့ အဲဒီကလုပ်ထားတဲ့ style ထဲက font: normal normal 100% 'Lucida Grande','Trebuchet MS'; ကိုတွေ့တိုင်း font: normal normal 100% 'ZawGyi-One','Lucida Grande','Trebuchet MS';
လို့ ဇော်ဂျီဖောင့်လေးလိုက်ထည့်ဗျ ။ ရသွားလိမ့်မယ်။
ဘလော့ကtitileမှာမြန်မာလို ရိုက်ရင်ကောင်းကောင်းမပေါ်ဘူးဖြစ်နေလို့...ဘယ်လိုကြောင့်လဲပြောပြပါဦး >>> Please tell me Blog name . Thank ...
အထိက Font တွေမှာ Zawgyi-one အကုန်မဖြည့်ရသေးလို့ပါ...
ကို DBA ပြောလိုရှာပြီး ပြင်လိုက်ရင် OK သွားမှာပါ...
အကုန်လုံးတတ်သလောက်တော့ပြင်ထားပြီးပြီ...firefox မှာအဆင်ပြေတယ်...eot ဖြုတ်ရင်လဲအဆင်ပြေတယ်...IE>internetoption>accessibility>အလယ်ကကောင်ကို check ပေးထားရင်မြင်ရတယ်..(အဲဒါကeot မဖြုတ်)..အားရင်ကျွန်တော့ ဘလော့က source code လေးတချက်လောက်စစ်ပေးပါလား....:P:P
အဲဒါကို မြင်တိုင်း ဒီလို
font: normal bold 130% 'Zawgyi-One','Lucida Grande','Trebuchet MS'; လို့ ဇော်ဂျီဖောင့်လေးတွေ လိုက်ထည့်ဗျ၊
အဲလိုဘဲ တချို့နေရာတွေမှာ ဒီလိုတွေ့သေး
font-family: "Lucida Grande", "Trebuchet MS"; ဒီမှာလဲ အပေါ်ကလိုဘဲ ဇော်ဂျီဖောင့်လိုက်ထည့်
default="normal normal 100% 'Zawgyi1','Zawgyi-One',Verdana, sans-serif"><Variable name="pagetitlefont" description="Page Header Font"
type="font" default="normal normal 100% 'Zawgyi1','Zawgyi-One','Lucida Grande','Trebuchet MS'">
အဲဒီက လုပ်ထားတဲ့ eot မှာ သုံးထားတာက 'Zawgyi1' လား 'Zawgyi-One' လားသေခြာအောင်စစ်ကြည့်ပါဦး။ eot မှာသုံးထားတာ 'Zawgyi-One' ဆိုရင် CSS မှာ 'Zawgyi-One' ကိုရှေ့ဆုံးမှာ ထားတာ စိတ်အချရဆုံးပါဘဲ၊ သဘောကတော့ ဒီလိုပြင်စေခြင်တာပါ။
default="normal normal 100% 'Zawgyi-One','Zawgyi1',Verdana, sans-serif"><Variable name="pagetitlefont" description="Page Header Font"
type="font" default="normal normal 100% 'Zawgyi-One','Zawgyi1','Lucida Grande','Trebuchet MS'">
အစ်ကိုပြောတာတွေအကုန်လုပ်ပြီးပြီမရဘူးဖြစ်နေတယ်...ဒီကောင်က IE မှာဘဲပြသနာဖြစ်နေတာ...
ကျွန်တော်တော့ eot ကြောင့်လိုထင်တာဘဲ..ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ဖြုတ်လိုက်ရင်ကောင်းသွားရော..
ကျွန်တော့ကို eot လေးလုပ်ပေးကြပါလား...:D:D
Blogspot မှာ Login account ပြောင်းချင်လို့။
ကျနော် blog တစ်ခုကို creativefox21 ဆိုတဲ့ gmail account နဲ့ လုပ်ထားတယ်။
နောက်တစ်ခုကို kosai.thz ဆိုတဲ့ gmail account နဲ့လုပ်ထားတယ်။
အခု အဲဒီ blog နှစ်ခုကို kosai.thz ဆိုတဲ့ account ကနေပဲ Managed လုပ်ချင်လို့။
တစ်ခုကို ပြင်ချင်ရင် account တစ်ခါ ပြောင်းနေရလို့
အားကိုးပါတယ် MZ ကပညာရှင်များခင်ဗျား .....
၁. အကို့ ရဲ့ blog ကို log in ဝင်လိုက်ပါ
၂. dashboard-->settings-->permissions ကိုသွားပါ
၃. ထိုအထဲ မှ ADD AUTHORS ကို select လုပ်ပါ
၄. ထိုမှ ပေါ်လာသော invite box တွင် အကို့ရဲ့ နောက် email ကို invite လုပ်လိုက်ပါ
၅. invite လုပ်ထားသော email ကိုပြန်စစ်ပါ
၆. ထိုအထဲမှာ ရောက်နေသော invitation မှ link ကို click လုပ်ပါ
၇. ဒါဆိုရင် blog တွင် post လုပ်လို့ရပါပီ
၈. setting များကိုပါပြင်လိုပါက အရင် email ဖြင့်ပြန်ဝင်ပြီး second email ကို admin privileges assign လုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်
၉. assign ကို dashboard-->settings-->permissions မှပင်လုပ်နိုင်ပါသည်
ကျေးဇူးပါ aung 24 ရေ။ ဒီနေ့မှ ဒီ title အောက်ကိုရောက်လာတာ။ ဘယ်အချိန်ထဲကဖြေပေးထားလဲတိ၀ူး .. ဟီး .. ဟီး .. ကျေးဇူးတင်နောက်ကျသွားတယ်ထင်တယ်။
Blogspot Template Design ကို ကိုယ့်ဟာကိုဆွဲချင်တယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် အစကစပြီး step by step ပြပေးကြပါလားခင်ဗျာ။
ဖြူ့ရဲ့ ဘလော့မှာ တစ်ခြား free site ကပေးတဲ့ template ကိုပြောင်းတင်တာတင်လို့မရဖြစ်နေတယ် သူ့ဆိုဒ်ထဲကပေးထားတာကိုတင်တာတော့တင်လို့ရတယ်
၁။ ကျွန်တော့်ရဲ့ဘလောခ့်မှာ Read More Function ကိုရေးတာအဆင်မပြေပါ၊ Error တွေပေါ်နေပါတယ်၊ ဖြစ်နိုင်ရင် အဲဒီ Function လေးကိုရေးတင်ပေးစေလိုပါတယ်။မြန်မာဘလောခ့်ကာ များအတွက်ရေးထားသေား လမ်းညွှန်အားလုံး ဖတ်ပြီးလုပ်ကြည့်လဲ မရပါ။
၂။ ကျွန်တော့်ဘလောခ့် Template ကို ဘယ်ကွန်ပျူတာ၊ ဘယ် ဘရောက်ဇာ နဲ့မဆိုကြည့်ကောင်းအောင် လုပ်နိုင်သော Width, Height , Auto Adjustment Function လေးများရှိတယ်ဆိုရင်ဖော်ပြပေးစေလိုပါတယ်။:)
phyumar wrote: »
blog template က xml extension နဲ့ပါအဲဒါဟုတ်မဟုတ်ပြန်ကြည့်ပါ ပြီးတော့ အရင်တန်းပလိတ်ကို ဒေါင်လုတ် ဆွဲထားပါ ပြီးမှ upload တင်ကြည့်ပါ ရမလားတော့မသိဘူးဗျ
nazgaul wrote: »
ကိုစေတန် ရဲ့ ဖုန်တက်နေတဲ့ စာအုပ်မှာတော့ရေးထားတယ်ဗျ သုံးလို့ရမရတော့မသိဘူး ကျွန်တော်စမ်းကြည့်လိုက်ဦးမယ် ပြီးရင်ပြန်တင်ပေးမယ်
ဒီမှာ ဆွေးနွေးထားတာတော့ရှိတယ် ဗျ
ကျွန်တော်ဘလော့မှာ နှင်းကျတာလေးတွေလုပ်ချင်လို ့ဟီးပြောသာပြောရတာ ဒီဇင်ဘာတောင်ကုန်နေပြီ blogspot မှာပါ wordpress မှာ နှင်းကျတာလုပ်နည်းတွေတော့တွေ ့တယ် blogspot မှာကောဘယ်လိုလုပ်ရလဲသိချင်လို ့ပါဖြေပေးကြပါအုန်းနော်..
kothura wrote: »
အကိုကြီး ညီ blog template တစ် ခုကို down ပြီး template ပြောင်းလိုက်ပါတယ်...ပုံမှန်upload, view blog ဆိုတာနဲ့ ပြောင်းလိုက်တဲ့ template ကိုမြင်ရပါပြီ..... အခုဒီမှာကျတော့ photobucket logo တွေ ပါနေပါတယ်...ညီလည်း edit html ထဲနေ ဒာဲဒီ photobucket logo code တွေကို ဖျက်လိုက်ပါတယ်...blog မှာ photobucket logoတွေ ပျောက်သွားပေမဲ့ blog မှာဘာမှမပေါ်လာပါဘူး...သူရဲ့code ထဲမှာcreative commons licenses တွေလည်းပြောထားပါတယ်...ညီလည်းနားမလည်းဘူးအကို
အဲဒါ ညီ blog လေးကို သူtemplate အတိုင်းပေါ်ဒောင်ဘာ
ဆက်လုပ်ရမလဲအကို..ညီသွားယူတဲ့ template ကဒီကပါအကို...http://themelib.com/2008/06/windows-vista-blogger-template/...( WP vista) ဆိုတဲ့ဟာပါ..ကူညီပါဒာုံး........ညီက css ,html တော့ဘာမှမသိဘူးနော် အကို....အခုမှစာဒာုပ်ဖတ်ပြီးစမ်းနေတုန်းပဲ....:((:((:((:((:((
ဖြေပေးကြပါဒာုံဒာကိုတို့....ညီ blog လေးကဘာမှမပေါ်တာကြာပြီ....:77::77::77::77::77::77:
ဖြေပေးကြပါဒာုံဒာကိုတို့....ညီ blog လေးကဘာမှမပေါ်တာကြာပြီ....:77::77::77::77::77:
Toekalay wrote: »
Blogspot မှာ နှင်းတွေ ကျချင်တယ်ဆိုရင် -
Edit HTML ကို၀င်လိုက်...
<head> အပေါ်မှာ အောက်ကကုဒ်လေးကို ထည့်ပေးလိုက်...
ပြီးရင် Save ..ဒါဆို အဆင်ပြေပါပြီ...
အကိုကြီး ညီ blog template တစ် ခုကို down ပြီး template ပြောင်းလိုက်ပါတယ်...ပုံမှန်upload, view blog ဆိုတာနဲ့ ပြောင်းလိုက်တဲ့ template ကိုမြင်ရပါပြီ..... အခုဒီမှာကျတော့ photobucket logo တွေ ပါနေပါတယ်...ညီလည်း edit html ထဲနေ ဒာဲဒီ photobucket logo code တွေကို ဖျက်လိုက်ပါတယ်...blog မှာ photobucket logoတွေ ပျောက်သွားပေမဲ့ blog မှာဘာမှမပေါ်လာပါဘူး..
ကျွန်တော့်အထင် အဲဒီ Template က ပုံတွေကို photobucket မှာ Upload တင်ထားပြီး လင့်ခ်တွေ ကသေနေတာ ဖြစ်မယ် ...ကုဒ်တွေကို သွားဖျက်လိုက်ရင်တော့ ဘာမှ ပေါ်လာမှာ မဟုတ်တော့ဘူး ...အဲဒီ လင့်ခ်တွေနေရာမှာ တခြားဆိုဒ်တစ်ခုမှာ Upload တင်ပြီး အစားထိုးလိုက်ရင်တော့ အဆင်ပြေမယ် ထင်ပါတယ် ...
နှင်း ကျတာမဟုတ်ပဲ တခြားဟာရှိဘူးလား ဟင်:d
နေပူချင်ရင်တော့ စာကြည့်မီးလေးတစ်ခုလောက် ဝယ်ပြီး မော်နီတာကို ထိုးထားလိုက်ပါလားဗျာ အဲ့ဒါက အလုပ်ရှုပ်သက်သာမယ်ထင်တယ်။:d
မိုးရွာတာကြည့်ခြင်ရင်တော့ ရေပန်းနဲ့ မော်နီတာကိုဖြန်းထားရမှာပေါ့နော်
သားကိုလည်းကယ်ကြပါအုံး သားblogတစ်ခုကိုစမ်းတစ်၀ါး၀ါးလုပ်နေပါတယ် www.blogspot.com ကနေကျော်ခွပြီးတော့လုပ်နေပါတယ် .co.cc လင့်ခ်ပြောင်းပေးထားပါတယ် မတောက်တစ်ခေါက်လျှောက်ဖတ်ပြီးတော့ . . . ဖြစ်နေတဲ့ပြသာနာကတော့ blogspot ကနေ template ဒေါင်းလုပ်တစ်ခုဆွဲပြီး upload လုပ်ဘာညာအဆင့်အတိုင်းလျှောက်လုပ်ပြီးလည်းပြီးရောကြည့်ကြည့်တော့ပေါ်တယ် သူပေါ်တာကတစ်မျိူးဗျာ့ အဲဒီမှာကွိုင်တာဘဲ ဒီလိုဗျာ ကျော်ခွပြီး၀င်တယ်ဗျာ အကုန်ပြောင်းပြီးပြီ View Blog ကြည့်တော့လည်းအိုကေပေါ ့... sign out လုပ်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေကို ငါ template လေးလှတယ်ကွဆိုပြီးလင့်ခ်ပေးကြွားလည်းကြွားရော သေပြီဆရာ အရှက်ကိုကွဲရော မင်းဟာဘာမှာလည်းမပါဘူးတဲ့ ဗလာကြီးတဲ့ ကွှျန်တော်၀င်ကြည့်တော့လည်း template ကပုံတွေပျောက်နေတယ်ဗျာ တူတူပုန်းနေကျတာလားမသိဘူး ကွိုင်ဗျိူ ့လုပ်ကြပါအုံး sing in နဲ့ကြည့်ရင် template အပြည့်အစုံမြင်ရတယ် sing out ဆိုရင် မြင်ရတော့ဘူး . . . ၀ါးး ၀ါ းးး ၀ ါးးး ရှက်လိုက်တာ
blog address လေး ပေးပါလား... ကြည့် ကြည့်ရအောင် :68: